काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय रासायनिक मलको अभाव दिनहुँ बढ्न थालेपछि यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि मन्त्रालयले यस्तो तयारी सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कारखाना स्थापनाका लागि गम्भीर छफफल थाल्नुभएकाे हाे ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यताबारे यस अघिका सरकार र लगानी बाेर्डलगायतका निकायहरुले गरेका अध्ययनलाई समेत मध्यनजर गर्दै किसानले बेहोर्दै आएको मलको अभावको दीर्घकालिन समाधान गर्ने हेतुले मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्नेबारे गम्भीर तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
‘रासायनिक मल कारखाना स्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाउने तयारी गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मलको माग बढिरहेका बेला पुराना अध्ययनहरुको आधारमा यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विज्ञहरु सम्मिलित एक कार्यदल बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’
आचार्यका अनुसार यसरी गठन गरिने कार्यदल कृषि सचिवको नेतृत्वमा हुनसक्ने र त्यसमा मन्त्रालय तथा स्वतन्त्र विज्ञसमेतको सहभागिता हुन सक्नेछ । उहाँका अनुसार कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयको निश्कर्ष भएपनि यसमा ठोस छलफल भने हुन बाँकी नै छ ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि यस अघि भएका अध्ययनहरुले महोत्तरीको बर्दिबास र नवलपरासीको सुनवललगायतका केही स्थान उपयुक्त हुनसक्ने निश्कर्ष निकालेको पाइन्छ । तर बिजुलीको सहायतामा कारखाना सञ्चालन गर्दा निकै महँगो पर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि प्राकृतिक ग्याँस सस्तो हुने भएपनि नेपालमा त्यो उपलब्ध नहुने भएकाले भारतबाट पाइपमा ग्याँस ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । मन्त्रालयले किसानले भोगिरहनुपरेको मलको सधैंको अभावीलाई सधैंका लागि समाधान गर्न यस्तो काम गर्न थालेको डा. गंगादत्त आचार्यले प्रष्ट पार्नुभयो ।